Waatan Shaxda Birta Ah Ee Uu Jose Mourinho Doonayo Inuu Premier League Ugu Dagaalamo Kaddib Saxeexyada Bale Iyo Reguilon – Laacibnet.net
Waatan Shaxda Birta Ah Ee Uu Jose Mourinho Doonayo Inuu Premier League Ugu Dagaalamo Kaddib Saxeexyada Bale Iyo Reguilon
September 17, 2020 Abdiwahab Ahmed
Kooxda ree London ee Tottenham ayaa ku dhaw inay ku guuleysato saxeexyada xiddigaha Real Madrid ee Gareth Bale iyo Sergio Reguilon kuwaas oo haddaba la xaqiijin karo inay yihiin ciyaartoy Spurs ah oo kaliya wakhti ka xigo inay kooxdaas metelaan.
Tababare Jose Mourinho ayaa saxeexyo deg-deg ah u baahday kahor xidhitaanka suuqa kala iibsiga kaddib markii ay guuldarro 1-0 ah ku furteen Premier League iyagoo ku hor kufay kooxda Everton.
Iyadoo ay dhaw-dhaw yihiin saxeexyada Bale iyo Reguilon isla markaana ay Tottenham horeba u samaysay heshiisyada Matt Doherty oo daafac midig ah iyo khadka dhexe ee bur-buriyaha ah ee Hojbjerg ayaanu halkan idinkula wadaagaynaa shaxda macquulka ah ee ay xilli ciyaareedkan ku dagaal geli karaan.
Spurs ayuu shaxdan oo ay samaysay shabakadda WhoScored booska goolka ugu soo baxay kabtan Hugo Lloris oo sida la filayo kasoo horrayn doona Gazzaniga iyo Joe Hart.
Labada daafac dhexe ayaa walow uu isbedel ku iman karo ay hadda kasoo muuqdeen Eric Dier iyo Alderweireld oo uu kulankii ugu dambeeyay soo xushay Jose Mourinho halka labada daafac garab ay yihiin saxeexa cusub ee Doherty iyo Reguilon oo qudhiisa saxeex cusub lagu sii tilmaamo karo.
Saddexda khad dhexe ee shaxdan oo ay iska waayeen xiddigo badan oo miisaan ku dhex leh Tottenham sida Dele Alli iyo Moussa Sissoko ayay kasoo muuqdeen Gio Lo Celso, Hojbjerg iyo Harry Winks oo saddexley cajiib ah samayn kara.
Weerarka shaxdan oo holac ah ayay garbaha saaran yihiin Son Hueng Min iyo Gareth Bale halka uu booska weeraryahanka dhexe kasoo muuqday Harry Kane.